अर्थमन्त्रीले भने-‘सुुरुङ मार्ग निर्माणमा स्वीस सरकारको सहयोग आवश्यक छ’ – BikashNews
अर्थमन्त्रीले भने-‘सुुरुङ मार्ग निर्माणमा स्वीस सरकारको सहयोग आवश्यक छ’
२०७५ चैत ७ गते १८:५५ विकासन्युज
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्वीस डेभलपमेण्ट कोअपरेशन एजेन्सीका महानिर्देशक एचई मेनुएर सागरबीच भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा विहीबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र विकास प्रयासमा स्वीस सरकारले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । भेटमा थप सहयोगका क्षेत्रहरु बारे छलफल समेत भएको थियो ।
विशेषगरी, यातायात तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको कार्यमा स्वीस सरकारको विशेष दक्षता र अनुभव रहेकोले सो प्रविधिलाई नेपालमा प्रयोग गर्न चाहेको खतिवडाले धारणा व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेको दुई सुरुङ मार्गको निर्माणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन स्वीस सरकारसँग विशेष सहयोगको आग्रह गरे ।
बैठकमा महानिर्देशक सागरले नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सफल भएको तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । भेटमा नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण प्राप्त गर्न सक्ने लाभका क्षेत्रहरुमा आगामी दिनहरुमा पनि सहयोगको निरन्तरता रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।